Alpha Centauri- ၎င်းကား အဘယ်နည်း၊ လက္ခဏာများ၊ အရေးပါမှုနှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 10/05/2022 10:00 | နက္ခတ္တဗေဒ
Stephen Hawking၊ Yuri Milner နှင့် Mark Zuckerberg တို့သည် Breakthrough Starshot ဟုခေါ်သော အစပျိုးမှုအသစ်အတွက် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ယင်းနည်းပညာသည် တစ်နေ့တွင် ကမ္ဘာမြေ၏အိမ်နီးနားချင်းကြယ်တစ်ပွင့်ထံရောက်ရှိရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းပညာ၊ Alpha Centauri. ၎င်းသည် နေနှင့် အနီးဆုံးကြယ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ အတော်လေး "လွယ်ကူသော" ပစ်မှတ်ဖြစ်သောကြောင့် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြယ်စင်အိမ်နီးနားချင်းများကို ကမ္ဘာနှင့်တူသောဂြိုလ်များအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေကို စောင့်ကြည့်နေပါသည်။ Alpha Centauri သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အနီးကပ်ဆုံးကြယ်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် အာကာသအကြောင်းပြောသောအခါတွင် ၎င်းသည် ထိုမျှနီးကပ်ခြင်းမရှိပေ။ ၎င်းသည် အလင်းနှစ်4ထက်ပိုဝေးသည် သို့မဟုတ် 25 ဘီလီယံမိုင်။ ပြဿနာက ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်း အာကာသခရီးဟာ အလွန်နှေးကွေးပါတယ်။ အလျင်မြန်ဆုံး ရွေ့လျားနေသော Voyager အာကာသယာဉ်သည် လူသားများ ပထမဆုံး အာဖရိကမှ ထွက်ခွာချိန်တွင် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၁ မိုင်နှုန်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာဂြိုဟ်မှ ထွက်ခွာသွားပါက၊ ၎င်းသည် ယခုအချိန်တွင် Alpha Centauri သို့ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် Alpha Centauri၊ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် အရေးပါမှုအကြောင်း သင်သိလိုသမျှကို ပြောပြပါမည်။
1 Alpha Centauri စနစ်
2 Alpha Centauri ၏တည်နေရာနှင့်ကြယ်များ
Alpha Centauri စနစ်
၎င်းသည် နေနှင့် အနီးဆုံးကြယ်ဖြစ်ပြီး တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်သာ မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယမြောက် အတောက်ပဆုံးကြယ်ဖြစ်ပြီး အလင်းတစ်ချက်တည်းနှင့်တူသော ကြယ်များစွာပါဝင်သည်။ နေနှင့် အနီးကပ်ဆုံး ကြယ်စင်အိမ်နီးချင်းများသည် Alpha Centauri စနစ်တွင် ကြယ်သုံးပွင့်ဖြစ်သည်။
ပင်မကြယ် နှစ်လုံးသည် ဒွိစုံအတွဲအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသည့် Alpha Centauri A နှင့် B ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာမြေမှ ပျမ်းမျှအလင်းနှစ် 4,3 ကွာဝေးသည်။. တတိယကြယ်ကတော့ Proxima Centauri ဖြစ်ပါတယ်။ Alpha Centauri A နှင့် B သည် ဘုံဘာရီဗဟိုပြုပတ်လမ်းတစ်ခုတွင် နှစ် 80 တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံသည်။ ၎င်းတို့ကြားရှိ ပျမ်းမျှအကွာအဝေးသည် နက္ခတ္တဗေဒယူနစ် ၁၁ ခုခန့် (AU သို့မဟုတ် AU) ခန့်ဖြစ်ပြီး နေနှင့် ယူရေးနပ်စ်ကြားတွင် တွေ့ရသည့် တူညီသောအကွာအဝေးဖြစ်သည်။ Proxima Centauri သည် အလင်းနှစ်၏ ငါးပုံတစ်ပုံ သို့မဟုတ် 11 AU အကွာအဝေးဖြစ်ပြီး အခြားသော ကြယ်နှစ်စင်းမှ 13.000 AU အကွာအဝေးဖြစ်ပြီး ၎င်းကို တူညီသောစနစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟု ယူဆသင့်သလားဟု နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်အချို့က မေးခွန်းထုတ်ကြသည်။
Alpha Centauri A သည် ကမ္ဘာမှမြင်ရသည့် စတုတ္ထမြောက် အတောက်ပဆုံးကြယ်ဖြစ်သော်လည်း Alpha Centauri A နှင့် B မှပေါင်းစပ်အလင်းရောင်သည် အနည်းငယ်ပိုကြီးသောကြောင့် ယင်းသဘောအရ ၎င်းသည် ကမ္ဘာ၏ကောင်းကင်တွင်မြင်ရသည့် တတိယအတောက်ပဆုံးကြယ်ဖြစ်သည်။ အဝါရောင်ကြယ် Alpha Centauri A သည် ကျွန်ုပ်တို့နေနှင့်တူသော်လည်း အနည်းငယ်ပိုကြီးသည်။ ကမ္ဘာမြေနှင့် နီးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်တွင် တောက်ပနေပါသည်။ ၎င်း၏ မျက်နှာပြင် အပူချိန်သည် ကျွန်ုပ်တို့ နေထက် ဒီဂရီ ကယ်လ်ဗင် အနည်းငယ် ပိုအေးသော်လည်း၊ ၎င်း၏ ကြီးမားသော အချင်းနှင့် စုစုပေါင်း မျက်နှာပြင် ဧရိယာသည် နေထက် 1,6 ဆ ပိုမိုတောက်ပစေသည်။
စနစ်၏အသေးဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော လိမ္မော်ရောင် Alpha Centauri B သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေထက် အနည်းငယ်သေးငယ်ပြီး ရောင်စဉ်တန်းအမျိုးအစား K2 ရှိသည်။ ၎င်း၏ အေးမြသော အပူချိန်နှင့် နေ၏ တောက်ပမှု ထက်ဝက်မျှသာ ရှိသောကြောင့် Alpha Centauri B သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကောင်းကင်တွင် 21st အတောက်ပဆုံး ကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ် သူ့ဘာသာသူ လင်းလက်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီနှစ်ခု ၎င်းတို့သည် စနစ်၏ အတောက်ပဆုံး အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး အနှစ် 80 တိုင်း ဒြပ်ဆွဲအား၏ ဘုံဗဟိုသို့ လည်ပတ်နေသည်။. ပတ်လမ်းများသည် elliptical မြင့်မားပြီး ကြယ်နှစ်လုံးကြားရှိ ပျမ်းမျှအကွာအဝေးသည် 11 AU သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ-နေအကွာအဝေးခန့်ဖြစ်သည်။
Alpha Centauri ၏တည်နေရာနှင့်ကြယ်များ
ဤကြယ်စနစ်သည် နေနှင့်အနီးဆုံးကြယ်စနစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး နေမှအလင်းနှစ် 4,37 ခန့်၊ ကီလိုမီတာ 41.300 သန်းနှင့် ညီမျှသည်။
Alpha Centauri ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကြယ်များမှာ သုံးမျိုးဖြစ်သည်။
Proxima Centauri- ဤကြယ်သည် လောင်စာဆီ ပို၍ နှေးကွေးစွာ လောင်ကျွမ်းသောကြောင့် ၎င်းသည် ကြာရှည်စွာ တည်ရှိနိုင်သည်။ 2016 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် Proximabအမည်ရှိ ဂြိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Proxima Centauri ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်နိုင်သော ဇုန်အတွင်း ပတ်နေသော ကမ္ဘာအရွယ် ဂြိုလ်တစ်ခုကို တွေ့ရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ Proxima Centauri ကို စကော့တလန် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် Robert Innes မှ ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Alpha Centauri A: ၎င်းသည် ဒွိကြယ်စနစ်မှ လိမ္မော်ရောင် K-အမျိုးအစားကြယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တောက်ပပြီး ကြီးမားပြီး နေထက် အသက်ကြီးသည်ဟု ယူဆရသည်။ ၎င်းကို အဝါရောင်ထောင်ပြီး အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။ ၎င်းသည် 22 ရက်လည်ပတ်မှုရှိသည်။
Alpha Centauri B- ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးဆုံးကြယ်၊ နေ၊ ရောင်စဉ်တန်း G အမျိုးအစားနှင့် အလွန်ဆင်တူပြီး နှစ် 80 ခန့်ပတ်လမ်းအတွင်း လှည့်ပတ်နေပါသည်။ A နှင့် တစ်ချိန်တည်း မွေးဖွားခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များသည် Alpha Centauri တွင် ကမ္ဘာနှစ်ထပ်ချိတ်ဆက်ထားသော ဂြိုလ်များတည်ရှိခြင်းအတွက် ကွဲလွဲသောအထောက်အထားများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် exoplanet Alpha Centauri B ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေပါသည်။ ဤဂြိုလ်သည် ကမ္ဘာနှင့်ဆင်တူသောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ ပြင်ပဂြိုဟ်များ၏ တည်ရှိမှုသည် တူညီသောစနစ်တွင် လှည့်ပတ်နေသော ဂြိုလ်များ ထပ်မံရှိရမည်ဟု ညွှန်ပြသည်။
သက်ရှိကမ္ဘာများကို လက်ခံကျင်းပရန် ဤစနစ်၏ အလားအလာသည် သိပ္ပံပညာရှင်များကို အမြဲစိတ်ဝင်စားနေသော်လည်း၊ လူသိများသော exoplanets များကို ထိုနေရာတွင် မတွေ့ဖူးပါ။တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ၎င်းသည် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များအတွက် ဒေသတွင်းရှိ ဂြိုလ်အရာဝတ္ထုများကို စောင့်ကြည့်ရန် အလွန်နီးကပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Nature Communications မှထုတ်ဝေသော စာတမ်းတစ်ခုတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် European Southern Observatory's (ESO) Very Large Telescope ကြောင့် Alpha Centauri A ၏ နေထိုင်နိုင်သောဇုန်၏ တောက်ပသော အပူဓါတ်ပုံများကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငရုတ်သီး။
ESO နှင့် Breakthrough Observing Astronomy Initiative တို့မှ လှူဒါန်းသည့် Alpha Center Regional Near-Earth (NEAR) ပရောဂျက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် အဆိုပါအချက်ပြမှုကို ရယူခဲ့သည်။ အလှူငွေ ယူရို 2,8 သန်းခန့်. ရုရှားဘီလျံနာ Yuri Milner ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော နောက်ပိုင်းတွင် Alpha Centauri ဝန်းကျင်ရှိ ကျောက်ဆောင်များ၊ ကမ္ဘာအရွယ်အစား ဂြိုလ်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အလင်းနှစ် 20 အတွင်း အခြားကြယ်စနစ်များကို ရှာဖွေသည်။
NEAR သည် ကြယ်အလင်းကို ပိတ်ဆို့ကာ ကြယ်အလင်းကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေချိန်တွင် ဂြိုဟ်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများမှ အပူအမှတ်အသားများကို ရှာဖွေပေးသည့် အပူခရိုနိုဂရပ်အပါအဝင် ချီလီတယ်လီစကုပ်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများစွာကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ဒေတာနာရီ 100 ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်၊ Alpha Centauri A ဝန်းကျင်တွင် အချက်ပြမှုများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။.
သံသယရှိသော ဂြိုဟ်ကို အမည်နာမတောင် မဖော်ပြထားသလို ၎င်း၏တည်ရှိမှုကိုလည်း အတည်ပြုထားခြင်း မရှိပေ။ အချက်ပြမှုအသစ်က ၎င်းသည် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်၏ အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာနှင့်တူသော ဂြိုလ်တစ်ခုအကြောင်းကို မပြောဘဲ၊ ကမ္ဘာထက် ငါးဆမှ ခုနစ်ဆအထိ ပိုကြီးသော ဓာတ်ငွေ့ပူလုံးလုံးကြီးတစ်လုံးသာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် သက်ရှိဟု ယူဆရသည့် အခြေအနေတွင်၊ ၎င်းသည် တိမ်များတွင် ဆိုင်းငံ့ထားသော အဏုဇီဝပုံစံဖြင့် ပေါ်လာနိုင်သည်။ အချက်ပြမှုသည် ပူပြင်းသော စကြာဝဠာဖုန်မှုန့်များ၊ နောက်ခံတွင် ပိုမိုဝေးကွာသော အရာများ သို့မဟုတ် လေလွင့်နေသော ဖိုတွန်ကဲ့သို့သော အခြားအရာတစ်ခုခုကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် Alpha Centauri နှင့် ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » နက္ခတ္တဗေဒ » Alpha Centauri